သစ်မာဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ဖင်းဂါးဘုတ်နေရာတွင် ထန်းသားဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဖင်းဂါးဘုတ် အစားထိုးထ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းမြို့ ဂစ်တာလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ဂစ်တာများတွင် ယခင်က လက်ဖတ် (Finger Board) များကို သစ်မာဖြင့်သာပြုလုပ်ရာ ယခုအခါ အသုံးပြု ရာတွင် ကြာရှည်ခိုင်ခံ့စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ထန်းသားများဖြင့် အစားထိုးထုတ်လုပ်သူ များလာကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဂစ်တာထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင် ၃ဝ ခန့်ရှိရာ စစ်ကိုင်းဂစ်တာအိုး များကို ထင်းရှူးသား၊ အထပ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး လက်တံကို ကျွန်းသား၊ လက်ဖတ် နှင့် ဘရိတ်ခုံများကို သစ်မာဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ စစ်ကိုင်းဂစ်တာထုတ်လုပ်သူများထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်တချို့မှာ ထုတ်လုပ်သည့်ဂစ်တာများအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ဂစ်တာအိုးများကို ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အသံလုံစေရန် တီထွင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ကြသလို လက်ဖတ် (Finger Board)နှင့် ဘရိတ်ခုံကိုလည်း သစ်မာထက် ပိုမိုတာရှည်ခံသည့်အပြင် ဈေး နှုန်းချိုသာသည့် ထန်းသားဖြင့် စတင်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေ ကြပြီဖြစ်သည်။
”လက်ဖတ်နဲ့ ဘရိတ်ခုံက အရောင်တင်ဆီနဲ့ လှပသေသပ် အောင်လုပ်ပြီး တပ်ဆင်ရပါ တယ်။ တချို့ အရောင်အသွေး လှအောင် ဈေးရအောင် ထုတ် လုပ်သူတွေက လက်ဖတ်နဲ့ ဘရိတ် ခုံကို သစ်အရောင်လှတဲ့ ပိတောက် သား၊ သစ်မာသား သုံးကြတယ်။ တလောက ဆားလင်းကြီးနယ် က မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အလှူ ပွဲသွားတာ ခုတ်လှဲပြီးသား ထန်း ပင်စည်တွေတွေ့လို့ ဈေးချိုချို နဲ့ရလို့ ဝယ်လာပြီး စစ်ကိုင်းအ လုပ်ရုံမှာ ဂစ်တာလက်ဖတ်အ ဖြစ် ပြုလုပ်ကြည့်တယ်။ ထန်း သားက မာတဲ့အပြင် ချိတ်ဆေး ပေါလစ်မသုတ်ဘဲနဲ့ အရောင် လှနေတာ တွေ့ရလို့ နောင်ထုတ် မယ့်ဂစ်တာများမှာ သစ်မာအ စား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သွားပါမယ်”ဟု စစ်ကိုင်းမြို့ ထုံးဘိုရပ်ရတနာဂစ်တာလုပ်ငန်းမှ ဦးကြည်တင်က ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းဂစ်တာလုပ်ငန်းများတွင် ဂစ်တာအိုးများကို ထင်းရှူးသား၊ အထပ်သားများ ဖြင့်ပြုလုပ်၍ လက်တံကို ကျွန်းသားလက်ဖတ်နှင့် ဘရိတ်ခုံကို သစ်မာဖြင့်ပြုလုပ်ရာ သစ်မာ ဈေးကြီးခြင်း၊ အသားကောင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲရန် ခက်ခဲခြင်းများကြောင့် ထုတ်လုပ်စရိတ်စက ကြီးမြင့်မှုရှိသည်။ ယခုအခါ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့် ထန်းသားများ အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့် စစ်ကိုင်းဂစ်တာထုတ်လုပ်နေသူများထဲမှ လုပ်ငန်းရှင်တချို့မှာ ထန်းသားလက်ဖတ်နှင့် ဘရိတ်ခုံများ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
'အနာဂတ်ကလေးငယ်များ ဘဝသာယာလှပဖို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို တားဆီးကြပါစို့' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသိပညာ??